အသက်အရွယ် 23 - (ED)7လ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် - ငါစိတ်ခံစားမှုနှောင်ကြိုးလိုအပ်
အသက် ၂၃ - (ED) ၇ လ - ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ခံစားမှုနှောင်ကြိုးလိုအပ်ခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်သည် ၂၃ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ED မှပျော့ပြောင်းပြီးပြင်းထန်သော ED ကိုတိုက်ထုတ်နေခဲ့သည်။ ငါမှတ်မိသလောက်ငါတစ်နေ့တစ်ကြိမ် PMO ကိုသုံးလေ့ရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ငါ့ရဲ့လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပျက်စီးစေခဲ့တယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်မှာလုံးလုံးမခက်ဘူး။
ငါဟာလှပသောမိန်းမများနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ ED ကြောင့်အခွင့်အရေးတိုင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါလိင်တူချစ်သူဘဝရောက်နေပြီလို့တွေးမိပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုဆွဲဆောင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါမှာလိင်တူချစ်သူတွေအပေါ်ဘာမှမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာမိန်းမတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲမက်ဖွယ်ရာပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့တွေးမိလိုက်တယ်။ အထူးသဖြင့်ငါသူတို့ကိုဆွဲဆောင်နေတုန်းပဲ၊ သူတို့နဲ့လိင်ဆက်ဆံလို့မရဘူး။ ငါလိင်အင်္ဂါများအပေါ်ဖတ်ပြီးငါ၌တစ် ဦး မူကွဲရှိသည်လိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် NOPE၊ ကိုယ့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအမြဲတမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ငါ့ ဦး နှောက်ကိုတက်လိုက်တယ်။ ငါ NoFap စဖွင့်တုန်းကပေါ့။
ငါ NoFap ကို ၇ လကြာအောင်လုပ်နေတယ်၊ ​​ခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါဟာခဏကြာပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာငါတိုးတက်မှုသတိပြုမိသည်။ ငါလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါငါမှာ ED ရှိနေသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းပိုကောင်းလာတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့် ED ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာပြဖို့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကပြခဲ့တယ်။
ငါမိန်းကလေးတစ်ဦးသည်လွန်ခဲ့သောတနင်္ဂနွေနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သူမနဲ့ငါရှိခဲ့ဖူးတဲ့တခြားလူတွေကြားကခြားနားချက်ကဒီညမှာငါတို့မကြိုးစားခဲ့ကြဘူး။ တကယ်တော့ငါသူမကိုလေးကြိမ်တွေ့ဖူးပြီးလိင်ဆက်ဆံမှုလည်းမရှိခဲ့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမနဲ့မတွေ့ခင်ချက်ချင်းပြန်ဆုံတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်မပြန်နိုင်ခဲ့လို့ပါ။ ကံကောင်းတာကသူမချက်ချင်းလိင်မဆက်ဆံချင်ဘူး ကျနော်တို့တစ်ညလုံးစကားပြောနှင့်ထွက်အောင် (ငါကမိနစ်တိုင်းပျော်မွေ့ခဲ့ပေမယ့်ငါ့အဘောင်းဘီအတွက်မနှိုးဆော်သံမခံစားရဘူး)
ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာငါတို့ရက်စွဲတစ်ခုထွက်သွားခဲ့တယ်။ ငါတို့ထွက်ခွာသွားတော့ဒီအချိန်မှာငါဘောင်းဘီထဲနိုးထလာတယ်။ ဒါဟာကြီးမြတ်ပေမယ့်ထူးခြားတဲ့ဘာမျှမဖြစ်ခဲ့သည်။ ရွက်လွှင့်ဝက်သည်ကျွန်ုပ်ရရှိသောအရာအားလုံးဖြစ်သော်လည်း၊ နှစ်များအတွင်းရိုးရှင်းစွာထုတ်ဖော်ခြင်းမှမည်သည့်နှိုးဆော်မှုမှမရရှိခဲ့ပါ။ ငါအမြဲတမ်းလှုံ့ဆော်မှုအချို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်။
သူမပတ် ၀ န်းကျင်မရှိသည့်အချိန်တွင်သူမသည်သူမကိုမစဉ်းစားတော့ပါ။
ကျနော်တို့တတိယနေ့၌သွား၏။ လိင်မရှိသေးပေမယ့်ဒီတစ်ခါမှာတော့ငါပြင်းထန်စွာပြင်းထန်လာတယ်! တကယ်နွေးနွေးထွေးထွေးနမ်းရှုပ်ခြင်းမရှိဘဲတိုက်ရိုက်နှိုးဆွမှုမလိုအပ်ပါ။ သိပ်မကြာဘူး၊ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့ငါ့မျက်နှာကိုပြုံးလိုက်တယ်။
နောက်နေ့အလုပ်မှာသူမကိုစဉ်းစားရုံပဲရတယ်။ ငါ Highschool ကတည်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်ခွင်၌ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခြင်းသည်ရှက်စရာဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ငါပြmyနာကိုတကယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အချိန်ပဲ!
သူမရောက်လာပြီးကျွန်မမှာလိင်ဆက်ဆံမှုကင်းမဲ့နေချိန်မှာကျွန်မတို့ဟာအတွင်းခံအဝတ်အစားတွေ ၀ င်လာတယ်။ နမ်းခြင်း၊ ထိခြင်း၊ ကြိတ်ခြင်း၊ ထိုအကြီးက !! ငါနှစ်များတွင်ဖြစ်သကဲ့သို့ထက်ပိုတယ်။ ငါခက်ခဲရုံတင်မကဘူး၊ မင်းဆရာ ၀ န်ကမင်းကိုမတိုင်ပင်ခင်လေးနာရီကြာမှာဒီအလံကိုအပြည့်အ ၀ ရွက်တိုင်မှာသိမ်းထားနိုင်တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တကယ့်ကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အချိန်ပဲ။
သူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုရသေးသော်လည်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၌ကျွန်ုပ်သွားရန်လမ်းများစွာရှိသေးသည်။ ယခုမူဥမင်၏အဆုံး၌အလင်းကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့နိုင်သည်။ အလားတူပြproblemsနာများနှင့်အတူထွက်ရှိမည်သူမဆိုငါ့အကြံပေးချက်ကနှေးကွေးယူပါလိမ့်မယ်။ ပထမညမှာဒီမိန်းကလေးနဲ့အိပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖျော်ဖြေမှုမအောင်မြင်လို့သူမကိုထပ်ခါထပ်ခါမတွေ့ဖူးဘူး။ ဒါဟာငါပျောက်နေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မဟုတ်ဘဲစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပဲ။ ငါသူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံနိုင်ခြင်းမပြုမီဤမိန်းကလေးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် (သိသာသည်မှာကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော်၎င်းကိုသဘောပေါက်ရန်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်အကြာကြီး) ။ ဒါဟာငါတခြားသူတွေနဲ့ကျော်သွားတဲ့အဆင့်ပဲ။ ငါနောက်တဖန် PMO ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ကြောင့်ငါကြောင့်ပိုကောင်းတဲ့လူတစ် ဦး ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ NoFap ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါသည်သင်တို့အားလုံး Self- တိုးတက်မှုများအတွက်သင်၏ခရီး၌ကောင်းသောကံအလိုရှိ၏။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရမ်းခက်အောင်မရိုက်ပါနှင့်။ ငါသက်သေပြနေတယ်
LINK - ငါတစ်နှစ်ကျော်၌ရှိခဲ့ဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးခံစားမှု။ NoFap ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏ PMO သွေးဆောင်မှု ED မှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ငါသည်ဤသူသည်အခြားသူတစ် ဦး ကိုကူညီနိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်!